कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन चैत ८ देखि खुल्ने - Nayapul Online
प्रकाशित मिति : Wednesday, January 30, 2019 nayapulonline
काठमाण्डौँ – कोरियन भाषा परीक्षा (इपिएस)को लागि चैत ८ देखि आवेदन दर्ता हुने भएको छ। १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता हुने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ।
कोरियामा गई काम गर्न इच्छुक नेपालीका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्न लागेको हो। २०७५ जेठ २६ र २७ गते दुई–दुई सिफ्टमा परीक्षा हुने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। लिखित परीक्षा १ सय पूर्णाङ्कको र सुनाई १ सय पूर्णाङ्कको हुने छ।
परीक्षा शुल्क २४ डलर तोकिएको छ। परीक्षा केन्द्र भने पछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। काठमाडौं र पोरखाबाट परीक्षा हुनेछ। दरखास्त दिँदा नै आवेदकले परीक्षा दिने दुईमध्ये एक शहर रोज्नुपर्नेछ।
आवेदन दर्ता गर्नका लागि eoers.epsnepal.gov.np मा गई अनलाइन फारम भर्नुपर्नेछ।
फारम भर्नका लागि राहदानीको फोटो भएको पेजको रंगीन स्कयान गरी जेपिजी इमेज फाइल बनाइ अपलोड गर्नुपर्नेछ। आवेदनमा अनिवार्य रुपमा इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्वर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। फारममा तीन महिनायताको फोटो अपलोड गर्नुपर्नेछ।
कुल ७ हजार १ सय जनाले यसपटक मौका पाउने अनुमान छ। जसमा उत्पादनमूलकतर्फ ४ हजार ८ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार ३ सय तोकिएको छ।
१८ वर्ष पुरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिनेहरु फौजदारी अभियोगमा नपरेको, गैह्र कानूनी रुपमा कोरिया बसी फिर्ता पठाएको हुन नहुने, सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएको हुनुपर्ने छ।
लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी गर्नुस् तयारी
डा. केसीको अवस्था जटिल आइसियुमा भर्ना हुन अस्वीकार
बालअधिकारकर्मीहरुले ‘बालबालिका सम्बन्धी बिधेयक, २०७५’ च्याते
बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितका लागि नयाँ शक्ति पार्टीले ५ लाख रुपैयाँ सहयोग
समायोजन पुरा भएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने, मन्त्री लालबाबु
क्रिसमस, थाहा नभएका तीन रोचक प्रसंगहरु